Isithando somlilo esincibilikisa i-Clay Graphite Crucible Manufacturers uma siqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, sinezinzuzo ezivelele ezingenakuqhathaniswa ngokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, njll., futhi ijabulela idumela elihle emakethe. I-Xngtailong ifingqa iziphambeko zemikhiqizo edlule futhi iqhubeka ikuthuthukisa. Imininingwane ye-Induction furnace encibilika iClay Graphite Crucible Manufacturers ingenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zakho.
Ama-graphite crucibles asetshenziswa kakhulu ekuncibilikisweni kwezinsimbi zamathuluzi e-alloy, izinsimbi ezingezona ayoni, nama-alloys azo kwezensimbi, ezisansimbi, emishinini, ngamakhemikhali, nakweminye imikhakha yezimboni, futhi zinemiphumela emihle yobuchwepheshe nezomnotho.
I-Liling xing tai ende ekhethekile ye-ceramic co., Ltd inohlelo oluphelele lokulawula ikhwalithi.
1.Ingabe uyalamukela ibhizinisi le-OEM?
Yebo, sinikeza isevisi ye-OEM ne-ODM. Vele usithumelele umdwebo wakho uma unawo. Uma ungenawo umdwebo, vele usitshele umbono wakho, sizokwenzela umdwebo.
2.Hlobo luni lwesitifiketi onaso?
Sine ISO9001, ISO14001,PED,SGS
3.Ngingakwazi ukuthola amasampula embonini yakho?
Yebo, isampula limahhala, kodwa inkokhiso esheshayo ingeyakho.
I-1.Equipment: Sinomugqa ophelele wokukhiqiza kanye nemishini yokuhlola, kuhlanganise nomugqa wokukhiqiza othomathikhi.
2.Iqembu:Sinethimba lethu elethu ukwenza ucwaningo, ukuklama, ukukhiqiza nokudayisa.
3.Ifilosofi:Ngekhwalithi enhle kakhulu, isevisi yezinga lokuqala, ibhizinisi elithembekile
4.Ikhwalithi:Siphumelele i-IS0 9001:2005. ejwayelekile, uzinzile, uthembekile
I-Liling Xing Tai Long Special Ceramic Co., Ltd. yasungulwa ngo-1997, igxile kwezocwaningo nentuthuko, ikhiqiza i-crucible fire assay kanye ne-cupel. Imikhiqizo isetshenziselwa ukuhlaziywa kwensimbi eyigugu, ukuhlola ilabhorethri yezimayini, ukuhlola amaminerali, nokuhlola igolide. I-fire assay crucibles material i-fireclay exutshwe nezinye izinto eziphikisayo, ingakwazi ukumelana nezinga lokushisa elifinyelela ku-1300 ℃. Banokumelana okuhle kakhulu nokuhlasela kwe-flux, ukuguguleka, ukuqhekeka, nokushaqeka okushisayo. Njengomkhiqizi onamandla ochwepheshe we-fire assay crucible nge-cupel, sine-7000 metres square metres isakhiwo esisha sefektri esinomugqa wokukhiqiza othomathikhi. Inkampani ihlale ibambelela ekusindeni kwekhwalithi, ukusungula izinto ezintsha, kanye nentuthuko, ubuqotho bomkhiqizo, ukuvikela kanye nokucabangela amabhizinisi esevisi ngemva kokuthengisa njengomgomo. Ngokuhamba kweminyaka, imikhiqizo yethu idayiswa kahle ezweni lonke futhi ithunyelwa eJalimane, e-United States, eBrazil, eRussia, eMexico...amazwe angaphezu kuka-20, izinga lomkhiqizo, kanye nenkonzo kunconywa kakhulu ngamakhasimende. "Ikhwalithi ephezulu, intengo ekhethwayo" imfundiso yethu yokuphatha. silindele ngobuqotho ukubambisana nenqwaba yamakhasimende asekhaya nawakwamanye amazwe, intuthuko evamile! Siyakwamukela ukuvakashela futhi uphenye inkampani yethu.
I-Xingtailong, enobubanzi obubanzi, ikhwalithi enhle, amanani aphansi kanye nemiklamo esesitayeleni, imikhiqizo yethu isetshenziswa kakhulu i-refractory, impahla ye-conductive, i-electrode, imboni yamandla e-athomu, imboni yezokuvikela nezinye izimboni.
I-graphite crucible ibuye isebenze kahle kakhulu, yonga amandla, ivikele imvelo emkhakheni wokukhiqiza izimboni.
Ukuhlanzeka okuphezulu kokumelana nokushisa kwe-graphite crucible
C 99%, abanye 1%
Cylindrical,sagger,Singakwazi ukuhlinzeka ngemikhiqizo ngokusho kwekhasimende&rsquo; imidwebo, amasampula kanye nemfuneko yokusebenza.
Isitifiketi se-ISO9001, imibiko ye-QC, ezinye izitifiketi ezidingekayo zekhasimende ziyatholakala ukuze zihlinzekwe.
Nge-DHL/TNT/Fedex express, impahla yomoya, ulwandle, njll.
Cishe izinsuku ezingama-7-15 ngemuva kokukhokha
Amandla Okuncibilika (kg)
I-OD Ephansi (mm)
I-Single Ring Graphite Melting Crucible
I-OD ephezulu (mm)
I-ID ephezulu (mm)
I-Double Ring Graphite Melting Crucible
1. Ukuzinza okuhle kokushisa: ifomula ekhethekile eqondise ekushisiseni kokushaqeka nezimo zokupholisa ezishaqisayo ze-graphite crucible.
2. Ukumelana nokugqwala okuhle nokusebenza kokumelana nomthelela kungaqinisekisa ukwethembeka kwekhwalithi yomkhiqizo.
3. Ukumelana okuhle ne-asidi eqinile ne-alkali.
4. I-conductivity enhle yokushisa inganciphisa kakhulu isikhathi sokuncibilika futhi yonge amandla.
5. Okuqukethwe komlotha we-graphite crucible kungaphansi kuka-300pp, okungaqinisekisa ukuthi insimbi eyigugu ayinakho ukungcola ngesikhathi sokuncibilika.
1. Sizohlinzeka ngokukhiqiza ngokunembe nangempumelelo futhi sisebenze ngokuya ngemidwebo yamakhasimende.
2. Sinethimba le-QC elichwepheshile lokuqinisekisa umkhiqizo wakho kangcono kakhulu.
3. Hlola impahla eluhlaza ngaphambi kokuqala ukukhiqiza.
4. Yiba nokuhlolwa okungahleliwe ngesikhathi sokucubungula.
5. Ukuhlola impilo yokusebenza ngaphambi kokuthunyelwa.
Ngokusekelwe ekubambeleleni ngokuqinile ku-ISO9001 noma Izinga Lemboni noma elinye Izinga Lamazwe Ngamazwe, onjiniyela bethu bokuhlola benza umkhondo ogcwele wezifundo kuwo wonke ukukhiqizwa.
IMIBUZO Evame ukubuzwa ngebhizinisi
Q1: Ingabe uhweba inkampani noma umenzi?
Q2: Uyawahlinzeka ngamasampula?
A: Yebo, amasampuli akhokhiswa mahhala.
Q3. Ungakwazi yini ukukhiqiza ngokwamasampuli?
A: Yebo, singakhiqiza ngamasampula akho noma imidwebo yobuchwepheshe. Singakwazi ukwakha isikhunta
Q4. Ingabe uyazivivinya zonke izimpahla zakho ngaphambi kokulethwa?
A: Yebo, sinesivivinyo esingu-100% ngaphambi kokulethwa izikhathi ezi-3.
Q5. Isevisi yangemuva kokuthengisa
IMP: Uma uthola noma yimiphi imikhiqizo ephukile ngobuningi, sizophinda sikhiqize noma sinxephezele imali ngokuqondile futhi sinikeze isaphulelo ngokulandelana okulandelayo.
I-Refractory Ceramic Sagger ivamise ukuba nkulu futhi isetshenziselwe ukuvikela noma ukusekela imikhiqizo ngesikhathi sokudubula, isibonelo ekuqhutshweni kwe-glost noma amabhisikidi e-tableware, noma ukubala impushana, njll. Le mikhiqizo ingenziwa ngokucindezela okomile, ukucindezelwa kwepulasitiki, nokuphonsa .I-Round Saggars: Amasaga ayindilinga noma ayindilinga.Ama-Square Saggars: Isikwele, unxande, noma amanye amasaga amise okwezimo ezilula.Ama-Special Saggars: Ama-Saggar anomumo oyinkimbinkimbi.Ithreyi ye-Corundum Mullite Refractory Ceramic sagger I-Clay Crucible Factory ye-refractory Kiln uma iqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, inezinzuzo ezivelele ezingenakuqhathaniswa ngokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, njll., futhi ijabulela idumela elihle emakethe. I-Xngtailong ifingqa iziphambeko zemikhiqizo edlule futhi iqhubeka ikuthuthukisa. Imininingwane ye-Corundum Mullite Refractory Ceramic sagger tray I-Clay Crucible Factory ye-refractory Kiln ingenziwa ngendlela oyifisayo ngokwezidingo zakho.
Ukucubungula Ngokwezifiso I-Silicon Carbide Graphite Crucible for Brass Copper Aluminium Smelting
Ama-sic crucibles ethu anikeza ukuphila okude, ukuncibilika ngokushesha, isivinini esingapheli sokuncibilika kanye nokumelana okukhethekile nezinguquko ezinobudlova zezinga lokushisa.I-Xingtailong Ngebanga elibanzi, ikhwalithi enhle, izintengo ezinengqondo nemiklamo esesitayeleni, imikhiqizo yethu isetshenziswa kakhulu i-Refractory, Conductive material, i-electrode, imboni yamandla e-Atomic, imboni yezokuvikela nezinye izimboni. I-Silicon carbide crucible nayo iyasebenza kakhulu, yonga amandla, ivikela imvelo emkhakheni wokukhiqiza izimboni.
I-Sinter Lithium Battery Coathod Material Fire Clay Ceramic Saggar
I-Saggar By Battery Material , i-refractory, inhloso yokuhlaziyaInjongo eyinhloko ye-crucible ne-sagger injengesitsha sokuhlaziya kanye nokudubula kokusebenza nomkhiqizo osetshenziswa ezimbonini ezihlukahlukene. Isibonelo: ukuhlaziya amalahle, ukuncibilika kwensimbi, ukuhlaziywa kanye nokushiswa kwezinto zokusetshenziswa zamakhemikhali, ukuhlaziywa nokuncibilika kwengilazi, ukuhlaziya kanye nokushiswa kwezinto ezingavamile zokuma- mineral, ukudubula okuphezulu.izinga lokushisa njengemikhiqizo ye-ceramic nokuncibilika kwezinto ezisetshenziswayo zombala oluhlaza .Ngaphansi kwezimo ezivamile, qala ubeke izinto okudingeka zihlaziywe futhi zifakwe ku-crucible noma sagger.Bese ufudumeza. Isivinini sokushisisa kanye nokwehla kwezinga lokushisa izishisa izinto izici izici izici izimo izimo izimo. izimo zokushisa lezici zezimpawu lezimpawu zezici izimo, izimo ezicindezelayo, izingashi zemikhiqizo, ezishesha ukunweba ukwanda kwempahla esetshenziswa ama-saggers, ukushisisa noma ukupholisa ngokushesha. ama-crucible kanye nama-sagger.Indlela engcono kakhulu ukwehlisa ijubane, okungandisa impilo yawo.
Ipuleti Le-Boron Nitride Ceramics Ecindezelwe Okushisayo Yokuphatha Insimbi Encibilikisiwe
I-Boron nitride ceramic rod, eyaziwa nangokuthi i-graphite emhlophe, inesakhiwo esifanayo ne-graphite. Inokufakwa kahle kukagesi, i-thermal conductivity, ukumelana nokushaqeka okuhle kakhulu kokushisa kanye nokuzinza kwamakhemikhali.I-Boron Nitride Ceramic Products ecindezelwe okushisayo enehexagonal ene-hexagonal, ibonisa inhlanganisela eyingqayizivele yamakhemikhali, ugesi, imishini kanye nezindawo ezishisayo, okuyenza ifanelekele uhla olubanzi lwezicelo zezimboni ezisebenza kahle kakhulu. isixazululo esisekelwe ezinhlotsheni zezidingo zamakhasimende embonini.